Kiiska Ernest Obama: "Amougou Belinga waa inuu noqdaa mid arxan daran oo naxariis daran"
DHAQAALAHAUNESDIB U EEGID
Waxaa lagu sheegay kiiska khiyaanada ee DRC, kooxda Afriland ee…
Stephen Blewett, madaxa cusub ee MTN Cameroon: guuleystaha…
Isabel dos Santos, Tidjane Thiam… Waa kuma Powerscourt, oo ah wakaaladda…
Wuxuu aaminsan yahay in sidan oo keliya ganacsaduhu uu uga badbaadin karo shirkadahiisa isku daygooda xun.
Falcelintii ayaa ku badatay xarigga saxafiga Ernest Obama. Agaasimihii hore ee Vision 4, oo uu dacweeyay milkiilaha kanaalkan, Jean Pierre Amougou Belinga, ficillada jebinta kalsoonida iyo khayaanada.
Dood furan oo la daabacay Juun 23, 2020, Dieudonne Essomba si ikhtiyaar ah ugu dhaqma sidii qareenka cabashada. «Amougou Belinga, isagu wuxuu leeyahay, oo dhistay koox dhaqaale oo awood badan, L'Anecdote, deegaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba cadaawad ku dhisan. Marka lagu daro warbaahinta, oo had iyo jeer kala-duwanaanta, waxaa jira waxyaabo qaali ah oo ku yaal Maaliyadda, waxbarashada sare, iwm. Awooddiisa caalamiga ah waxay siisaa sawirka saxda ah ee waxa loogu yeero "halyeey qaran" ".
Kadib markii dib loo xasuusto xaqiiqooyinka lagu eedeeyay ehelkeena, dhaqaalaha, lataliyaha "Club d'Elites", Bandhigga Axadda ee uu abuuray Ernest Obama, wuxuu ku taliyaa in la isdhaafsado Mr. Amougou Belinga.
"Nin ay hareereeyaan dhibaatooyinka noocaas ahi waa inuu ahaadaa mid feejignaada oo aan dulqaadan karin, waayo adduunkan naxariis darrada leh ee ay kuwa sharka leh uun ka badbaadaan, ma jirto meel loo naxariisto!" AMOUGOU BELINGA waa inuu noqdaa mid arxan daran, maxaa yeelay waa shuruud isaga u ah inuu ku noolaado ganacsade ahaan iyo bixiyaha ugu weyn ee shaqada iyo dakhliga kun qoys. Hadduu u oggolaado inuu noqdo mid jilicsan oo caqli badan, wuxuu naftiisa gelin lahaa khatar, isla astaantan, wuxuu khatar gelin doonaa kunka qoys ee ku tiirsan, ayuu qoray wargayska Dieudonné Essomba.
Si kastaba ha noqotee, wuxuu u qalmay hadaladiisa isagoo muujiyey rajo wanaagsan oo ku aaddan dhammaystirka guusha Ernest Obama. «Qofkii kuu sheegay in aan ku qoslno balaayiin ayaa been kuu sheegay! Dacwada OBAMA ayaa na dhibaysa waxaanan u rajeyneynaa wanaag inta kale kiiska. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in awoodiisa AMOUGOU BELINGA uu yareyn karo silica, ilaa iyo inta suurta gal ah iyo danaha Kooxda..
Waa kan qoraalka uu qoray Dieudonné Essomba:
Ku saabsan qabashada Obama Ernest
Cadhada uu ka qabo Mr. OBAMA oo uu ku barbaaray wiil, kaas oo uu ku barbaaray sidii shimbiraha ilmaha, oo uu ku aaminay dhammaan hawlgallada ugu nugul, ayaa laga soo bilaabo markaas ka dib, si qumman oo sharci ah. Waana wax intaas kasii badan sidaa daraadeed, inkasta oo laga shakiyo kharribaad, uma malaynaynin inuu si adag uga falceliyay sida ganacsade kasta uu sameyn lahaa iyo sida dowlad hufan u baahan tahay, U raac isaga inuu galo lacagaha shirkadda. Isagoo u maleeyay aabihiis dabiiciga ah, wuxuu doorbiday inuu siiyo fursad uu dib ugu soo laabto isaga oo u magacaabay Agaasimaha saxaafada qoraalka.
Muxuu ahaa hadafkii ay OBAMA ku raadinaysay qalabkeedii waalanaa ee ku biiraya cadowga kooxda? Madoow? Ma dooneysaa aargudasho? Laakiin aargudashada maxaa jira?
Heerkan ganacsi, kuwani waa waxyaalo aan la qaban karin! Uma qaadanayno khatarta ah qatar gelinta koox leh 1000 shaqaale ah oo aan sharciga la tiigsaneyn, gaar ahaanna Cameroon meesha shaqadu ku noqotay arrin nolosha iyo dhimashada!
Xiritaanka Mr. OBAMA ee Himilada 4 wuxuu dhaliyay jawaab celinno fara badan, kuwaas oo lagu sii daayay hakinta barnaamijka CLUB DES ELITES maanta oo Axad ah. Kuwa daacadda ah, waa wax laga xumaado waxa ku dhaca suxufigan kartida leh. Dadka kale, waa farxad aan caafimaad qabin markii ay dhacday qabyaalad la sheegay in ay la kacday, farxad munaafiqiin ah oo wejiga ka saareysa garsoorayaasha xadgudubka la sheegay in lagu xadgudbay xuquuqda eedaysanaha.
Waa in si cad loo idhaahdo: OBAMA looma xirin fikradihiisa ama qoraalkiisa ka dhanka ah Xirmooyinka Qabiil nooc kasta ha ahaadee. Xarigiisu wax shaqo ah kuma lahan hadaladii xoogga lahaa ee uu ka yeeli lahaa cabashadii sheegatay in ay awooda kula wareegeyso saldhigyada qabaa'ilka oo aan ka cabsaneyn in ay weeraraan safaaradaha ayna weeraraan Madaxa. ee Gobolka Yurub.
Sababaha loo xiray waa cad yihiin: ficillo maareyn, kuwaas oo xiriir laxiriira xiriir la leh aaminaadda uu u leeyahay Maamulaha.
Haddaba, ha loogu yeero difaacayaasha xuquuqda aadanaha sidaas darteed ha u helin fursad ay ku ciyaaraan ciyaarta ay ugu jecel yihiin, oo ah inay dilaan xukunkiisa AMOUGOU BELINGA, iyagoo ku eedeynaya dambi weyn oo karaahiyo ah: si loo caddeeyo in ganacsatada ay awoodaan waxay ka yimaadeen dhamaan bulshada, oo ay kujiraan qabiilka "caajis iyo raynrayn".
AMOUGOU BELINGA waxay dhistay koox dhaqaale oo xoog badan, ANECDOTE, gaar ahaan jawiga cadaawada dhaqaale iyo dhaqan ahaaneed. Marka lagu daro warbaahinta, oo had iyo jeer kala-duwanaanta, waxaa jira waxyaabo qaali ah oo ku yaal Maaliyadda, waxbarashada sare, iwm. Awooddiisa caalamiga ah waxay siisaa sawirka saxda ah ee waxa loogu yeero "halyey qaran".
Ganacsadaha wuxuu sidoo kale u istaagay dhaqankiisa, kaasoo si xagjir ah uga tagaya muuqaalka Epinal, kaasoo ku dhegan hawlwadeenadayada dhaqaalaha. Kuwaani waxaa caan ku ah isqarxintooda, damacyadooda, daacadnimadooda iyo mushaharka liita ee ay siiyaan shaqaalahooda, badiyaa waa walaalahooda qowmiyadeed ee ay u shaqeeyaan sida dameeraha digaaga.
Waxaa taa ka duwan, AMOUGOU BELINGA waxay la timid mushahar aad u sarreeya markay ahayd xaalado shaqo oo hufan, dhammaantoodna waxay ku dhammaadeen deeqsinimo iyo kaqeybgal firfircoon howlo fara badan oo samafal ah iyo howlo bulsheed, maadaama taageeradaan dhowaan la siiyay. laga bilaabo 50 milyan ilaa Bishop KLEDA oo loogu daweeyo Coronavirus.
Guushiisa cajiibka ah iyo guulaha lama filaanka ah ma soo jiidato oo keliya asxaabta, waa wax iska soo horjeedda! Deegaan ay ku badan yihiin shakhsiyaad xaasidnimo iyo xaasidnimo leh, guulahaas waxay kicinayaan nacayb, masayr iyo qadhaadh. Cadaawayaasha AMOUGOU BELINGA waxay ka yimaadaan meel walba! Kaftan, tartamayaal, qoys, qabiil, qabiilo kale, asxaab, iwm.
Dadka qaar ma aaminsana wax kasta oo indhahooda ku haya guushaan cajiibka ah, waxayna isku dayaan inay ugu sharraxaan aflagaadooyin badan ama suurogal ah: fursadan ayaa iska leh Wasiirkaas, ama wuxuu ka imaan lahaa ganacsatada, iwm.
Si kasta oo ay ahaataba, cadawyadan oo dhami waxay rabaan inay arkaan digsi digsiga ku dhex jira, aalad ku dul fadhida ciidda, kaas oo burburaya waqti kasta. Sidaa daraadeed dulqaadasho la’aantooda waxay sugayaan waxa u noqon doona warka "wanaagsan" ee iyaga: AMOUGOU BELINGA ayaa dhacay!
Waxay sugi karaan waqti dheer. Waqti dheer !
Taa baddalkeeda, waxaan runtii rabaa inaan talo ka bixiyo cilmiga dhaqaalaha si weynaantiisa AMOUGOU BELINGA: isaga iyo kooxda ANECDOTE ee uu si dulqaad leh u dhisay isbadal deegaan gaar ah oo naxariis darro ah, oo aan u dulqaadanayn wax qalad ah. Dunida Darwiiniga ah oo laga sameeyay rabshado, kaas oo kan ugu xoog weyn ku dumin kara wakhti kasta oo hoos yimaadda dharbaaxada cadawga.
Nin ay hareereeyaan dhibaatooyinka noocaas ahi waa inuu ahaadaa mid feejigan oo iscelceliya, maxaa yeelay adduunkan xunxun ee ay kuwa sharka leh uun ka badbaadaan, ma jirto meel loo naxariisto!
AMOUGOU BELINGA waa inuu noqdaa mid arxan daran, maxaa yeelay waa shuruud isaga u ah inuu ku noolaado ganacsade ahaan iyo bixiyaha ugu weyn ee shaqada iyo dakhliga kun qoys.
Hadduu u oggolaado inuu noqdo mid jilicsan oo caqli badan, wuxuu naftiisa gelin lahaa khatar, isla astaantan, wuxuu khatar gelin doonaa kunka qoys ee ku tiirsan.
Xaqiiqdii, waxay noqon lahayd mas'uuliyad darro! Haa, AMOUGOU BELINGA wuxuu noqon lahaa gebi ahaanba masuuliyad darro haddii, damiirkiisa, is-dhiibidiisa iyo dulqaadkiisa, ay sameeyeen cadaawayaashiisa oo nasiibdarro ku dhacday burburka sababtoo ah ficiladooda dambiilenimo, ee gelinaya shaqo la’aan daran kunka qoys ee ku tiirsan. isaga!
Taasi ma dhacdo oo meelo kale oo adduunka ah waxay ku bixisaa wax ka sii daran xabsi.
Qofkii kuu sheegay in aan ku qoslno balaayiin ayaa been kuu sheegay!
Dacwada OBAMA ayaa na dhibaysa waxaanan u rajeyneynaa wanaag inta kale kiiska. Waxaan sidoo kale rajeyneynaa in awoodiisa AMOUGOU BELINGA uu yareyn karo silica uu qabo, madaama tani ay macquul tahay iyo danta Kooxda.
In kasta oo la xusuusinayo qof kasta in aysan jirin wax micno ah oo u imanaya in lagu ciyaaro ninka caqliga leh oo lagu sameeyo khiyaanooyin yar yar oo leh bilyan FCFA dadka kale gaar ahaan kumanaan shaqooyin ah, deegaan cimilo xun iyo sidoo kale u dhinta Cameroon!
isha: http: //www.cameroon-info.net/article/cameroun-affaire-ernest-obama-dieudonne-essomba-eisisis--gro-quamougou-belinga-doit-etre-impitovable-et-375684.html
Waxaa lagu sheegay kiiska khiyaanada ee DRC, kooxda Afriland ee reer Cameroon Paul K.…
Stephen Blewett, madaxa cusub ee MTN Cameroon: guuleystaha Cameroon -…
Isabel dos Santos, Tidjane Thiam… Waa kuma Powerscourt, oo ah wakaaladda isgaarsiinta VIP ee…
La wareegida OM: oo ka dhuumaneysa ganacsadaha Franco-Tunisia Mohamed ...